Ciyaar Lagu Maamuusayay Munaasabadda Maalinta Dhir beerista Qaranka Oo Galabta Muqdisho Dhacday “Sawirro” – Radio Muqdisho
Ciyaar Lagu Maamuusayay Munaasabadda Maalinta Dhir beerista Qaranka Oo Galabta Muqdisho Dhacday “Sawirro”
Kooxaha Kubada Cagta ee Gaadiidka iyo Safaana ayaa galabta waxaa ay wada ciyaareen ciyaar lagu maamuusayay Munaasabada Maalinta Dhir beerista Qaranka Soomaaliyeed oo 17-ka April ku beegan, waxaana kooxahaasi ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan oo ay daawanayeen dadweyne ka kala yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo mas.uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad goboleedyada Dalka ka jira.
Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya ayaa daawanayay Ciyaartaas xiisaha badaneyd ee galabta ka dhacday Garoonka Koonis Stadium, waxaana ka mid ahaa wasiiradaasi wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maxamed Dalka Cabdullaahi Xasan Nuux , Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa, xubno wasiiro ah oo ka kala socday Maamul Goboleedyada dalka ka dhisan kuwaas oo maalmahaanba joogay Magaalada Muqdisho iyo xubnaha Gudiga Qaran ee loo saaray Maamuuska Maalintan.
Labada kooxood ayaa waqtigii loogu talo galay ciyaarta waxaa ay isla dhaafi waayeen bar bar dhac oo wax gool kalama dhalin ilaa aakhirkii rigoorayaal ay ku kala baxaan, iyadoo guushu ku raacday kooxda Gaadiidka 3-2.
Wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshadda Maamul Goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Shiikh Axmed oo ka hadlay gabagabadii ciyaartaas ayaa waxaa uu sheegay in ay muujineyso niyad wanaag iyo nabad galyada ay haystaan bulshada Caasimada ku nool uuna aad u bogaadinayo.
Wasiir ku xigeenka wasaarada Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa Xukuumada Soomaaliya Mudane Cabdinaasir Gaarane Maxamed ayaa isagu u mahad naqay kooxaha ciyaartan wanaagsan soo bandhigay iyo xiriirka Kubada Cagta Soomaaliyeed.
SAWIR QAADE AXMED CALI KAAHIYE